दरबार हत्याकाण्डको १९ बर्ष : कमजोर बन्दै राज्य, मौनतामा जनता – Mission Khabar
दरबार हत्याकाण्डको १९ बर्ष : कमजोर बन्दै राज्य, मौनतामा जनता
मिसन खबर १९ जेष्ठ २०७७, सोमबार १२:००
काठमाडौं । २०५८ साल जेठ १९ गते, नेपाली जनले अहिलेसम्म विर्सिन नसकेको त्यो दिन, नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र विरविक्रम शाहको वंश विनास भएको १९ बर्ष लाग्दैगर्दा घटनाको रहस्य अझै खुलेको छैन । बरु सरकाले त्यो कहालिलाग्दो हत्याकाण्ड बारे मौनता साधिरहेको छ ।
हत्याकाण्ड बारे सत्यतथ्यको प्रतिक्षा आम जनले गरिरहदा उच्च सुरक्षा घेराभित्र रहेको राजदरबारमा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दिपेन्द्र, राजकुमार निराजन, राजकुमारी श्रुतीसहितको हत्या कसरी सम्भव भयो ? भन्ने आम प्रश्न अझसम्म अनुत्तरित नै छ । राजतन्त्र हटेर मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको पनि निक्कै लामो समय व्यतित भएको छ । गणतन्त्र पछि संग्रहालयमा रुपान्तरण भएको नारायणहिटी दरबारको संरक्षणमै उदासिनता छ । यसले राजपरिवारको वंश नाश भएको जेठ १९ को कालो दिन रहश्यमै रहने निश्चित जस्तै बनाएको छ ।
राजा वीरेन्द्रको बंश नाशपछि नेपालमा राजतन्त्र धेरै समय टिक्न सकेन । राजनीतिक दलहरुले २०६२/६३ मा दोस्रो जनआन्दोलन चर्काए र नेपाल गणतन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रान्तम मुलुकमा रुपान्तरण भयो । नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको ७ वर्षपछि २०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्र समाप्तिको घोषणा भयो । नेपाली राजतन्त्रको इतिहासमा ज्ञानेन्द्र शाह अन्तिम राजा बने । दरबार हत्याकाण्ड जति रहस्यमा छ, त्यती नै शंका आशंका पनि बढिरहेका छन् ।
दीपेन्द्रको चरित्र तथा महत्वकांक्षा, दरबारको सुरक्षा र छानबीन आयोगको खुलासाले अहिले धेरै लख काटिएका छन् । दिपेन्द्रमाथी जुन अभियोग लगाइएको छ, त्यसलाई कसैले स्विकार्न मानिरहेका छैनन । दरबार हत्याकाण्ड हुँदा ३० वर्षको हाराहारीमा थिए दिपेन्द्र । अल्लरे आलोकाँचो उमेर र पनि उनी त्यति उत्ताउला थिएनन । दरबारभित्रको उनको आनिबानी खासै थाहा नभएपनि सार्वजनिक समारोहमा देखिने उनको उपस्थिति निक्कै शिष्ट र मर्यादित थियो । फेरी राजा वीरेन्द्रका घोषित उत्तराधिकारी (युवराजाधिराज) हुँने निश्चित नै थिए, दिपेन्द्र । जेठ १९ गते बेलुकी गोली चलेर राजा रानीहरू हताहत हुँदा दरबारका गतिविधिलाई सञ्चालन कसले गर्यो अनि कसको निर्देशनमा घाइते राजालाई नजिकैको वीर अस्पताल वा शिक्षण अस्पताल लैजानुको साटो निक्कै टाढाको सैनिक अस्पताल छाउनी लगियो ? यसले पनि रहस्यलाई थप रहस्यमा पारेको छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले घटनाबारे माफी नमाग्नु त एउटा घटना नै मान्नुपर्छ । उनले बेलाबखत कहालीलाग्दो हत्याकाण्ड बारे ग्राईन डिजाईन ओकलौँ भन्दै दिएको धम्किले पनि देशी विदेशी शक्तिको संलग्नतालाई संका गर्ने ठाउँ दिएको छ । अझ दरबार हत्याकाण्डको भोलिपल्ट सबेरैको उडानबाट पशुपतिशमशेरकी छोरी देवयानी दिल्ली दौडमा निश्किएकी थिईन । यति ठूलो घटना हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनमा किन निगरानी गरिएन ? नैतिक जिम्मेवारी नलिएका प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद्को बैठक बोलाएर घटनाबारे संसद् मार्फत जनतालाई जानकारीसम्म दिन आवश्यक ठानेनन ।
यी यावत घटनाले दरबार हत्याकाण्डको सत्यतथ्य लुकाउन तत्कालिन राज्य संयन्त्रकै भुमिका रहेकोमा दुईमत छैन । अझ, जननेता मदनभण्डारी मारिएको दासढुंगा घटना र दरबार हत्याकाण्डमा एउटै शक्तिको हात त छैन भनेर अड्कलबाँजी गरिदैगर्दा दुबै घटना रहश्यमै रहनुले ठूलै षड्यन्त्र थियो भन्ने खुलासा गरेको छ ।
क्याटेगोरी : जनचासो / सामाजिक सञ्जाल, जीवन भोगाई, देश / प्रदेश, समाचार